Kaominina Fenoarivo : nahazo trano famakiam-boky ny EPP | NewsMada
Nahazo toeram-pamakiam-boky ny EPP eny amin’ny kaominina Fenoarivo, distrika Atsimondrano ary notokanana, omaly. Ahitana boky fianarana, fialam-boly amin’ny tenim-pirenena malagasy sy vahiny roa ny efitrano nametrahana izany, izay fanomezana avy amin’ny vadin’ny filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Voahangy. Misy ordinatera sy fahitalavitra koa niaraka amin’ny boky ho an’ny mpianatra sy ny mponina ao anatin’ny kaominina. Ankoatra izay, nohavaozina koa ny efitranon’ny EPP efa tranainy be satria mpanohana voalohany ny fampianarana ny vadin’ny filoha, araka ny kabarin’ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Rabary Paul, teny an-toerana.
Ho fanampiana ny ray aman-drenin’ny mpianatra, horaisina ho mpiasam-panjakana avokoa ny mpampianatra Fram 29 ao amin’ny EPP, CEG sy lycée eo Fenoarivo an-tampon-tanàna ka izay tsy mbola tafiditra tamin’ny taona 2015, horaisina amin’ny andiany fahatelo ho avy izao. 2 472 ny isan’ny mpianatra amin’ny ambaratonga telo voalaza.
Ankoatra ny tranom-boky, notoloran’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena tablette koa ny mpianatry ny lycée eo Fenoarivo. Tokony hikajy ny fitaovana omena azy ny rehetra. « Raha very ny tablette, soloina avy hatrany ny mpitantana ny lycée nahitana ny tranga », hoy ny minisitra.
Tsy ny mpianatra ihany no nahazo fanomezana, nizarana vary, biskoy… ny mponina sahirana ao anatin’ny kaominina.